ဘာစီလိုနာနဲ့ အမွနျဆုံးစာခြုပျသဈခြုပျဖို့ မကျဆီ ကို တိုကျတှနျးလိုကျတဲ့ ဆရာဟောငျး Alfio Basile – the One Sports Journal
ကိုပါအမရေိကပွိုငျပှဲမှာ ပူပူနှေးနှေးခနျြပီယံဖွဈထားတဲ့ အာဂငျြတီးနား အသငျးခေါငျးဆောငျ မကျဆီ ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ဇှနျလ ၃၀ ရကျနေ့ ဘာစီလိုနာနဲ့ စာခြုပျသကျတမျးကုနျဆုံးပွီးထဲက အသငျးလကျမဲ့ဖွဈနတေဲ့သူဖွဈပါတယျ။
ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးကစားသမားဆုကို ၆ ကွိမျအထိရရှိထားတဲ့ မကျဆီ ကို ကမ်ဘာတဝနျးက အသငျးတိုငျးက အလိုရှိတယျဆိုတာကတော့ သံသယဖွဈစရာမရှိပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ မကျဆီ ရဲ့ လစာငှကေို ပေးခနြေိုငျတဲ့ အသငျးတှကေတော့ လကျခြိုးရလေို့ရပါတယျ။ ဘာစီလိုနာ တောငျ မကျဆီ ကို စာခြုပျသဈခြုပျဆိုနိုငျဖို့ ငှရေေးကွေးရေးပွဿနာကို အသညျးအသနျဖွရှေငျးနရေတာပါ။
အာဂငျြတီးနားလကျရှေးစငျအသငျးမှာ မကျဆီ နဲ့ လကျတှဲခဲ့ဖူးတဲ့ နညျးပွဟောငျး Alfio Basile ကတော့ မကျဆီ ကို အခွားအသငျးကိုမပွောငျးရှပေဲ့ ဘာစီလိုနာ မှာသာ ကစားသမားဘဝကို ရှဆေ့ကျဖို့ အခုလို တိုကျတှနျးသှားခဲ့ပါတယျ။
Basile က “ သူ့ကစားသမားဘဝမှာ အကောငျးဆုံးတှပေဲဖွဈဖို့ ဆုတောငျးပါတယျ။ ကြှနျတျောပွောတဲ့ အကောငျးဆုံးဆိုတာ ဘာစီလိုနာ အပွငျဖကျမှာတော့ မပါဝငျပါဘူး။ မကျဆီ ဘယျကိုပဲသှားသှား အဲ့နရောက ဘာကာ ထကျပိုကောငျးတဲ့ နရောဖွဈပါ့မလား။ ဘာစီလိုနာမှာ သူအကုနျပိုငျဆိုငျထားပွီးပွီ။ သူ့ကလေးတှလေညျး ကြောငျးတှနေဲ့ နသေားကနြပွေီ။ အဲ့တော့ သူဘယျကိုသှားအုနျးမှာလဲ။ ကာတာ ကိုလား .? ။ အကျကွောငျးထငျနတေဲ့ လုပျသကျတခုက ဘယျလောကျကွာကွာခံအုနျးမလဲဆိုတာကိုတော့ ဘယျသူမှမပွောနိုငျဘူး။ ကြှနျတေျာ့အမွငျအရတော့ မကျဆီ အနနေဲ့ ဘာစီလိုနာမှာ နောကျထပျ ၄ နှဈ ၅ နှဈလောကျ ဆကျရှိနအေုနျးမယျလို့ ထငျပါတယျ “ လို့ အငျတာဗြူးတခုမှာ ပွောခဲ့ပါတယျ။
အသကျ ၇၇ နှဈအရှယျရှိနပွေီဖွဈတဲ့ Basile ဟာ အာဂငျြတီးနား ဘောလုံးနတျဘုရား ၂ ပါးလို့ တငျစားရမယျ့ ဒီယဂေို မာရာဒိုနာ နဲ့ လီယို မကျဆီ တို့ ၂ ယောကျလုံးကို အာဂငျြတီးနားအသငျးမှာ နညျးပွခဲ့ဖူးတဲ့ ဂန်တဝငျတယောကျဖွဈပါတယျ။
သူ့လကျထကျမှာ အာဂငျြတီးနားအသငျးကို ကိုပါအမရေိကဖလား ၂ ကွိမျနဲ့ ကှနျဖကျဒရေးရှငျးဖလား ၁ ကွိမျ ရရှိအောငျ စှမျးဆောငျပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ဘာစီလိုနာနဲ့ အမြန်ဆုံးစာချုပ်သစ်ချုပ်ဖို့ မက်ဆီ ကို တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ ဆရာဟောင်း Alfio Basile
ကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲမှာ ပူပူနွေးနွေးချန်ပီယံဖြစ်ထားတဲ့ အာဂျင်တီးနား အသင်းခေါင်းဆောင် မက်ဆီ ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့ ဘာစီလိုနာနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးထဲက အသင်းလက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကို ၆ ကြိမ်အထိရရှိထားတဲ့ မက်ဆီ ကို ကမ္ဘာတဝန်းက အသင်းတိုင်းက အလိုရှိတယ်ဆိုတာကတော့ သံသယဖြစ်စရာမရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မက်ဆီ ရဲ့ လစာငွေကို ပေးချေနိုင်တဲ့ အသင်းတွေကတော့ လက်ချိုးရေလို့ရပါတယ်။ ဘာစီလိုနာ တောင် မက်ဆီ ကို စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့ ငွေရေးကြေးရေးပြဿနာကို အသည်းအသန်ဖြေရှင်းနေရတာပါ။
အာဂျင်တီးနားလက်ရွေးစင်အသင်းမှာ မက်ဆီ နဲ့ လက်တွဲခဲ့ဖူးတဲ့ နည်းပြဟောင်း Alfio Basile ကတော့ မက်ဆီ ကို အခြားအသင်းကိုမပြောင်းရွှေ့ပဲ ဘာစီလိုနာ မှာသာ ကစားသမားဘဝကို ရှေ့ဆက်ဖို့ အခုလို တိုက်တွန်းသွားခဲ့ပါတယ်။
Basile က “ သူ့ကစားသမားဘဝမှာ အကောင်းဆုံးတွေပဲဖြစ်ဖို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောတဲ့ အကောင်းဆုံးဆိုတာ ဘာစီလိုနာ အပြင်ဖက်မှာတော့ မပါဝင်ပါဘူး။ မက်ဆီ ဘယ်ကိုပဲသွားသွား အဲ့နေရာက ဘာကာ ထက်ပိုကောင်းတဲ့ နေရာဖြစ်ပါ့မလား။ ဘာစီလိုနာမှာ သူအကုန်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးပြီ။ သူ့ကလေးတွေလည်း ကျောင်းတွေနဲ့ နေသားကျနေပြီ။ အဲ့တော့ သူဘယ်ကိုသွားအုန်းမှာလဲ။ ကာတာ ကိုလား .? ။ အက်ကြောင်းထင်နေတဲ့ လုပ်သက်တခုက ဘယ်လောက်ကြာကြာခံအုန်းမလဲဆိုတာကိုတော့ ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူး။ ကျွန်တော့်အမြင်အရတော့ မက်ဆီ အနေနဲ့ ဘာစီလိုနာမှာ နောက်ထပ် ၄ နှစ် ၅ နှစ်လောက် ဆက်ရှိနေအုန်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ် “ လို့ အင်တာဗျူးတခုမှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၇၇ နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ Basile ဟာ အာဂျင်တီးနား ဘောလုံးနတ်ဘုရား ၂ ပါးလို့ တင်စားရမယ့် ဒီယေဂို မာရာဒိုနာ နဲ့ လီယို မက်ဆီ တို့ ၂ ယောက်လုံးကို အာဂျင်တီးနားအသင်းမှာ နည်းပြခဲ့ဖူးတဲ့ ဂန္တဝင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့လက်ထက်မှာ အာဂျင်တီးနားအသင်းကို ကိုပါအမေရိကဖလား ၂ ကြိမ်နဲ့ ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းဖလား ၁ ကြိမ် ရရှိအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။